WTTC wants travel to be safe but President Biden holds the key for vaccine | Health News
Home » Akụkọ Ahụike » WTTC chọrọ njem ga-adị mma mana Onye isi ala Biden nwere mkpịsị ugodi nke ogwu
WTTC chọrọ njem ga-adị mma mana Onye isi ala Biden nwere mkpịsị ugodi nke ogwu
Na nzuko WTTC a mechara na Cancun, Mexico. Enweghị mkparịta ụka ọhaneze banyere ọnọdụ ọdachi na India, mana CEO Gloria Guevara were okwu a wee gbaa Manuel Santos ajụjụ ọnụ, onye bịanyere aka na ya na ndị ọzọ 170 ịkwanye Onye isi ala US Biden imeghe ikike patent, na-ekwe ka ogwu ahụ ruo mba ndị na-emepe emepe
Mgbe onye isi oche WTTC, Gloria Guevara gbara onye isi ala Colombia mbụ Juan Manuel Santos ajụjụ ọnụ na Nnọkọ Njem Nleta nke emere na Cancun, ha zoro ezo na nzuzo na ha achọghị isoro ụwa. "Anyị enweghị nchebe ruo mgbe onye ọ bụla nwere nchebe."
Ọrịa ọjọọ a butere ọrịa ọjọọ na India na-ebute isi okwu nke Onye isi ala US Biden, "Anyị enweghị nchekwa ruo mgbe onye ọ bụla nwere nchekwa" bara uru nke ukwuu maka ụwa ndị njem na nke ụlọ ọrụ ọgwụ. E nwere obere okwu banyere India na Cancun, mana nke bụ eziokwu bụ na nje a na-aga ngwa ngwa na ọganihu niile e mere ugbu a n'ime ụwa nwere ike ịmalite.
Onye isi ala Biden ọ ga-eguzosi ike n'okwu ya? Kedu ihe WTTC na ndị bụbu ndị isi ala na ndị Nobel Peace Prize meriri ga-eme ka a nụ akwụkwọ ozi ha? Enweghị azịza ozugbo site na White House.
"Anyị enweghị nchebe ruo mgbe onye ọ bụla nwere nchebe" bụ nkwubi okwu na mkparịta ụka otu onye na onye isi ala Colombia na 2016 Nobel Peace Prize Winner Juan Manuel Santos na World Travel and Tourism Council CEO CEO Gloria Guevara na WTTC Summit na Cancun na Mọnde.
The World njem na njem nleta Council (WTTC) na onye bụbu onye isi ala Colombia Juan Manuel Santos mesoro nkwado ha maka okwu Onye isi ala US Biden dị ka ihe nzuzo wee hụ na e mechiri nnọkọ a niile na ịgba egwu. Media, gụnyere eTurboNews, gbochiri ịnweta ndekọ nke nnọkọ a kachasị mkpa na Summit.
Ndị isi ndị isi na ndị Nobel Peace Prize nabatara Onye isi ala Biden ka ọ hapụ iwu ikike ọgụgụ isi maka ọgwụ mgbochi COVID dịka isi ihe iji mepee ohere maka mba ndị na-emepe emepe iji mepụta ma ọ bụ nata ọgwụ mgbochi chọrọ ngwa ngwa. Onye isi ala US Biden ziri ezi mgbe o kwupụtara nghọta banyere ụwa jikọrọ ọnụ. Njem na njem nleta na-eme ka ụwa a nwee njikọ, ụwa enweghịkwa nchekwa ruo mgbe nwa amaala ọ bụla nke mba ọ bụla nwere nchekwa.
WTTC na-anọchite anya ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ụwa Travel na Tourism. Maazị Santos bụ onye na-arụ ọrụ na ngalaba ọha. Ikekwe leta a degaara Onye isi ala US abụghị ozi ụlọ ọrụ na-ahụ maka onwe ha chọrọ itinye aka na ya.
Maazị Santos na-ekerịta ozi a dị mkpa, dị ka onye bịanyere aka na akwụkwọ ozi ahụ nye Onye isi ala US Biden na Eprel 14 na Gloria Guevara na ndị nnọchi anya na WTTC Summit na Cancun, dị mkpa ma dị mkpa.
The World Tourism Network (WTN) toro akwụkwọ ozi ahụ otu ụbọchị mgbe ọ bịanyechara aka n’akwụkwọ. “Akwụkwọ ozi a bụ ụzọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem na njem njem mba ụwa iji wee kwụrụ ọtọ ma were ọganiihu mee ka ụwa bụrụ ebe nchekwa n’oge nsogbu a. Ọrịa zuru ụwa ọnụ ekwesịghị ime ka ọdịmma nke ụlọ ọrụ pharma nke onwe ya bụrụ naanị onye na-eweta enyemaka. ”
Gụọ na pịa na-esote iji gụọ akwụkwọ ozi zuru oke nye Onye isi ala US Biden wee lelee vidiyo nke mbụ WTTC Summit.